Ramamimampionona Gérard : “Fiaraha-mientana manaraka fepetra no handresena ny Coronavirus” | NewsMada
Ramamimampionona Gérard : “Fiaraha-mientana manaraka fepetra no handresena ny Coronavirus”
Miatrika ny fihanaky ny valanaretina Coronavirus i Madagasika amin’izao fotoana izao. Hanao ahoana? Maneho ny fijeriny ny filoha lefitry ny Komitin’ny fampihavanam-pirenena (CFM), Antananarivo, Ramamimampionona Gérard.
Gazety Taratra (*): Ahoana ny fijerinao ny fiatrehana ny fihanaky ny valanaretina Coronavirus amin’izao?
Ramamimampionona Gérard (-): Tsara ho fantatry ny rehetra: misy ny fahavalo mamono sy mandripaka eto amin’ny firenena. Tokony hoeken’ny rehetra izay. Rehefa miatrika fahavalo, anisan’ny soatoavina ngezabe ny hoe: mitabe tsy lanin’ny mamba. Ny fiaraha-mientana sy fiaraha-miombona no tena zava-dehibe voalohany ahazoantsika mandresy ny fahavalo… tsy hita maso. Amin’ny alalan’ny fanarahana ireo fitsipika sy fepetra apetraka izany: ny fahadiovana, ny fanajana elanelana… Raha misy ny aretina, manatona avy hatrany ny mpitsabo.
Anisan’ny zava-dehibe koa ny fahatsapan-tenan’ny tsirairay. Amin’ny andraikitra manandrify na izay tokony hatao izany. Sarotra be ny handresena io aretina io, raha vokatry ny fanerena avokoa vao hanao zavatra.
* Ny fijerinao ireo avy any ivelany nitondra ny tsimokaretina?
– Havantsika ireo tonga avy any ivelany, fantatra hoe nitondra ny tsimokaretina. Tsy ny fanenjehana sy ny fanesoana na ny fanaratsiana azy ireny no zava-dehibe. Tsy tokony hailikilika izany fa vao mainka aza anehoana fitiavana sy fanatonana izay tomponandraikitra amin’izany. Miafina izy raha enjehina, tsy hita izao ny sasany: lasa aiza?
Mila mahatsapa tena koa ireo olona ireo hanatona ny tomponandraikitra amin’izay tokony haleha, sao mitondra na manaparitaka… Eny, na ny fianakaviany aza, tokony hanoro ny amin’izay hijerena azy. Sao lasa mamono tena indray isika, raha tsy izay. Efa fiarovana ny olona manodidina ny fiarovana ny tena amin’izany. Fifanampiana ho an’ny olona rehetra izany amin’ny Malagasy.
*Ahoana ny amin’ireo olona tsy maintsy mivoaka ny trano, ohatra?
– Ho an’ny olona tsy maintsy maintsy mivoaka ny trano noho ny antony maro samihafa tsy azo anoarana, mba miezaka manaja ny fepetra indroa avo heny no ho izay mijanona any an-trano.
Fahavalo iombonana io ka tsy misy ifanilihana. Tsy misy finoana io, na foko, na antoko politika… Isika Malagasy rehetra no eto amin’io ka tsy tokony hifanavahana na amin’ny inona na inona fa hiaraha-miatrika. Fiombonam-po izany, fahatsapan-tenan’ny tsirairay, fandraisana andraikitra, ary fanarahana ny fitsipika sy toromarika ho fisorohana sy ho fitandroana ary ho fitandremana. Mariky ny fifankatiavana izany. Farany, zava-dehibe ilaina amin’izao ny fifampitsinjovana sy ny fifanampiana fa tsy ny fanararaotana.